SARIIRTA KULEYLKA LEH EE AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO (POLYCARBONATE): DABKA, KORONTADA IYO KULEYLKA CAADIGA AH - INFRASTRUCTURE
Sida loo sameeyo sariirta diiran ee beerta lagu koriyo: siyaabaha sahminta
Cimilada gobolladeenu waa sida meelo badan oo ka mid ah dhulka oo dhan ay maamusho ilaa wakhtiga beerto geedo dhul furan.
Gurye-dhireedku wuxuu yimaadaa gargaarka beeraleyda, laakiin waxaa jira shuruudo heerkulleed xitaa xitaa dhulka aqalka dhirta lagu koriyo. Si loo dedejiyo habka kululaynta dhulka lagu koriyo polycarbonate iyo si loo ilaaliyo geedaha ka yimaada isbadal heerkul aad u daran, waxaa habboon in lagu qalabeeyo sariirta diirran xilliga dayrta. Siyaabaha loo sameeyo tan, waxaan ka fiirsanaynaa maqaalkan.
Faa'iidada ugu weyn ee sariiraha diirran waa kululaynta kuleylka carrada, taas oo suurtagal ah ma aha in la goosto oo kaliya goor hore, laakiin sidoo kale si ay u kala fidiyaan inta ugu badan ee suurtagal ah.
Nafaqada lafteedu waxay bixisaa abuuritaanka horraantii geedo bishii May, iyo joogitaanka sariiraha diirran ee ku jira waxay u oggolaan doontaa geeddi-socodkan in uu ka dhaco xitaa horaantii - laga soo bilaabo badhtamaha April. Sidoo kale, sariirta diiran ee aqalka dhirta lagu koriyo ee polycarbonate waxay kuu oggolaaneysaa inaad kordhiso xilliga jilitaanka illaa bartamihii Oktoobar.
Baro sida si madaxbannaan loo dhigo sariirta qotodheer iyo sariir-sireed oo loogu talagalay strawberries.
Heat waa diirimaad, laakiin geedo wali waxay u baahan yihiin qorax ku filan koritaanka. Beerta lagu koriyo ee polycarbonate waxay leedahay saamayn iftiin leh, sidaas darteed ha ka baqin in qayb ka mid ah aqalka dhirta lagu koriyo uu ka yaraado. Oo weliba, Fiisooyinka ku talinaynaa in lagu haleeliyo lagu koriyo aagga laga bilaabo waqooyiga ilaa koonfur - sidaas dhirta sii kordhaya saf, hesho qoraxda sida ugu badan ee suurtagal ah iyo muddo dheer.
Ma taqaanaa? Iceland, lagu koriyo waxaa lagu dhajiyaa genters: Barkadaha dabiiciga ah ee biyo kulul waxay bixiyaan heerkulka lagama maarmaanka ah ee caleemaha.
Saacadaha sariiraha aqalka dhirta lagu koriyo
Haddii dhererka sariiraha ee aqalka dhirta lagu koriyo ay ku kooban tahay dhererka ugu dambeeya, waxeeyna ka duwanaan kartaa qof walba, kadibna sariirta kulul waxay ku dhowdahay heerkulku waa: 50-60 cm.
Iyadoo aan loo eegin haddii aad qaxayso qoryaha ama ka sameyska kabadhka sare, tiradani waxay la mid tahay sidii loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo oo dabiici ah oo dabiici ah leh.
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo sariirta diiran loogu sameyn karo: qaar ka mid ah waa kuwo dhaqaale ahaan qaali ah, kuwa kalena wax kharash ah ma laha, laakiin kharashka shaqaalahooda.
Waxaan u isticmaalnaa dabiiciga
Ugu fudud oo la awoodi karo dhammaan kuwa bannaanka si ay u abaabulaan marin diirran oo ku yaal aqalka dhirta lagu koriyo waa inay isticmaalaan nooca dabiiciga ah ee ina siiya. Sariirta walxaha dabiiciga ah ayaa la diyaariyaa xilliga dayrta: waa halkii ay ku badan tahay, laakiin horeba guga waxay siinaysaa diirran geedo lagama maarmaanka ah.
Qalabka dabiiciga ah ee dabiiciga ah wuxuu ka kooban yahay lakabyada soo socda
Qeybta sariiraha waxaa lagu daboolaa geedo waaweyn oo geedo iyo geedo, qiyaastii 5 cm dhexroorka. Isticmaalaan laamood oo keliya geedo gaajo leh, geedo qoyan soo saara rinjin, taasoo hoos u dhigaysa geedi-socodka kala-jajabinta.Dhumucda lakabka waa 20-25 cm;
Qaybta soo socota ee lakabka ah ee laamiyada curdanka ah iyo cawska qalalan. Labadan lakab waxay sameeyaan barkadood oo burburin doonta 2-3 sano;
Si aad u dardar geliso lakabka lakabyadii hore, waxaad ku tuurtaa laamaha lakabka khafiifka ah cawska cagaaran;
Lakabka xigta waa caleenta qalalan. Marxaladdan, sariirta horayba waxay u jirtey nus dhan;
Dusha sare ee lakabyada, waxaad ku kala firdhin kartaa lakabka khafiifka ah ee dhulka iyo soo saarida diyaargaraw ay ku jirto jeermisyo kuwaas oo isku dhejin kara organikada habka enzymatic, tusaale ahaan, "Vostok M-1" ama "Shine 3";
Ka dibna lakabka cawska cagaarka ah ayaa la marinayaa mar kale;
Lakabyada ugu dambeysa ee dabiiciga ah waa caleemo qalalan
Hadda wax kasta ayaa ka buuxsamay lakabka dhulka, 7-10 cm qaro weyn, halkaas oo geedo lagu beeray;
Haddii arinta organic ay ku filnayd qallalan, biyo badani.
Waa muhiim! Haddii aadan hubin in lakabka sare ee carrada waa ku filan horumarinta ee xididdada geedo, ka dibna marka la geliyo lakabyo sariirood diiran, ka sameeyaan godad for geedo, ka dib oo ku saabsan 50 cm kasta. Qeybta hoose ee godka waa in ay ahaato heerka lakabka cagaarka ah ee qalalan.
Tuubooyinka biyaha kulul
Tani waa qiimo aad u qaali ah, laakiin waa sida ugu wanaagsan uguna macquulsan sariiraha diirran gacmahaaga. Tuubooyinka biyaha kulul ee ka yimaada kuleylka waxaa lagu quudiyaa tuubooyinka la dhigo ee lagu kireeysto laftirka, laftiisa waxay ku noqotaa mar hore qaboojiyay. Sidaa darteed, ma aha oo kaliya ciidda waa kululeeyo ee lagu koriyo, laakiin sidoo kale hawada.
Waa muhiim! Ujeedadaas awgeed waxa fiican in la isticmaalo kuleyliye gaas, bamka iyo tuubooyinka balaastigga ah.
Qaabkan, fiilada korontada leh ee rinjiga leh, kuleylka kaas oo lagu xakameyn karo, ayaa la dhigayaa dhulka hoostiisa heer 40-50 cm.
Nidaamka ayaa la qabsadaa si marka ciidda ay u qabato illaa 25 ° C, waxay si toos ah u jarto. Xaqiijinta cabiraadda, waxaa kale oo lagama maarmaan ah in lagu rakibo heer-kuleylka.
Astaamaha geedo beerto
Geedka geedaha diirimaadyada ah waxaa lagu beeray bil ka hor inta aaney aqalka dhirta lagu koriyo, iyo daryeelka iyo waraabinta waxay u baahan yihiin isla. Saacaddani waxay qiyaastii 3-4 sano jir ah, mid kastana waxaa lagula talinayaa in uu dhirta dhaqameed u abuuro.
Sannad kowaad ka dib markii uu ururku sariirta sida, marka uu la kulmo dioxide kaarboon iyo nafaqooyinka, waxaa haboon in la beero qajaarka iyo dalagyada dalagyada.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiso u leedahay akhrinta sida loo doorto polycarbonate ee lagu koriyo aqalkaaga.
Sannadaha soo socda, marka nafaqada dabiicigu hoos u dhacdo, waxaa lagama maarmaan ah in la beddelo kaabajka, yaanyada, basbaaska, iyo dabacasaha, iyo marka ciidda ay ku dhowdahay, cagaarka iyo digirta si fiican u koraan.
In lagu koriyo oo leh kuleyliyo farsamo waqti ka dib waa in lagu shubo dhulka iyo bacriminta, waxayna u adeegi karaan inta aad u baahan tahay.
Sariir diiran ayaa ah shaki la'aan si xeelad fiican u ah goobaha gobollada leh cimilada qabow. Waxaa jira fursado badan oo ku saabsan sida loo qalabeeyo, waxa kaliya oo ay tahay inay go'aansato midka kugu habboon.
Ma taqaanaa? "Crystal Palace" - dhismaha qarnigii 14aad ee London (meel ay ka dhaceen munaasabado madadaalo iyo xafladaha boqorada) - asal ahaan loogu talagalay sida koriyo weyn.